Iindaba - Izinga lokukhula kweshishini lelanga lase-US liya kuthotywa kunyaka ozayo: izithintelo zokubonelela, ukunyuka kweendleko zempahla ekrwada.
I-American Solar Energy Industry Association kunye ne-Wood Mackenzie (uWood Mackenzie) ngokudibeneyo bakhuphe ingxelo echaza ukuba ngenxa yemiqathango yokubonelela kunye nokunyuka kweendleko zempahla eluhlaza, izinga lokukhula kweshishini lelanga lase-US ngo-2022 liya kuba ngama-25% ngaphantsi kunezibikezelo zangaphambili.
Idatha yamva nje ibonisa ukuba kwikota yesithathu, iindleko zokusetyenziswa, urhwebo, kunye neendawo zokuhlala zamandla elanga ziqhubekile nokunyuka.Phakathi kwabo, kumacandelo karhulumente kunye nezorhwebo, ukunyuka kweendleko zonyaka kwakuphezulu kakhulu ukususela kwi-2014.
Izinto eziluncedo zinovakalelo ngakumbi ekunyukeni kwamaxabiso.Nangona iindleko ze-photovoltaics ziye zawa nge-12% ukusuka kwikota yokuqala ye-2019 ukuya kwikota yokuqala ye-2021, kunye nokunyuka kwamva nje kwexabiso lentsimbi kunye nezinye izinto, ukunciphisa iindleko kwiminyaka emibini edlulileyo kuye kwagqitywa.
Ukongeza kwimiba yekhonkco lokubonelela, ukungaqiniseki kwezorhwebo kuye kwafaka uxinzelelo kushishino lwelanga.Nangona kunjalo, umthamo ofakiweyo wamandla elanga e-United States usanyuka nge-33% ukusuka kwixesha elifanayo kunyaka odlulileyo, ukufikelela kwi-5.4 GW, ukubeka irekhodi lomthamo osanda kufakwa kwikota yesithathu.Ngokuka Public Power Association (Public Power Association), amandla ewonke eMelika amalunga ne-1,200 GW.
Umthamo wendawo yokuhlala efakwe amandla elanga udlule kwi-1 GW kwikota yesithathu, kwaye ngaphezu kwe-130,000 iinkqubo ezifakwe kwikota enye.Eli lixesha lokuqala kwiirekhodi.Umlinganiselo wokusetyenziswa kwamandla elanga nawo wabeka irekhodi, kunye nomthamo ofakiweyo we-3.8 GW kwikota.
Nangona kunjalo, ayingawo onke amashishini elanga aphumelele ukukhula ngeli xesha.Ngenxa yemiba yoqhagamshelo kunye nokulibaziseka kokunikezelwa kwezixhobo, urhwebo kunye nomthamo woluntu ofakelweyo welanga wehle nge-10% kunye ne-21% yekota ngekota, ngokulandelelanayo.
Imakethi yelanga yase-US ayikaze ifumane izinto ezininzi ezichaseneyo.Ngakolunye uhlangothi, i-bottleneck ye-chain chain iyaqhubeka nokunyuka, ibeka yonke imboni engozini.Ngakolunye uhlangothi, "ukwakha kwakhona uMthetho wekamva elingcono" kulindeleke ukuba ube yinkuthazo enkulu yemarike kwishishini, elivumela ukuba lifezekise ukukhula kwexesha elide.
Ngokwengqikelelo kaWood Mackenzie, ukuba “uKwakha kwakhona uMthetho wekamva eliNgcono” usayinwe ube ngumthetho, amandla elanga aqokelelweyo eUnited States aya kudlula i-300 GW, ngokuphindwe kathathu amandla elanga akhoyo ngoku.Umthetho oyilwayo ubandakanya ukwandiswa kweekhredithi zerhafu yotyalo-mali kwaye kulindeleke ukuba udlale indima ebalulekileyo ekukhuleni kwamandla elanga e-United States.
Ibhalbhu yokuKhanya ngeSolar, Izibane zeSolar Led zezandyondyo, Isibane seSolar Powered, Izibane zeSolar zePhulo lokuqubha, I-Solar Street Light Pole, Izibane zeSolar ezingangenwa ngamanzi,